Ireo mpitsoam-ponenana Palestiniana very any Lybie · Global Voices teny Malagasy
Voadika ny 16 Marsa 2011 4:30 GMT
Vakio amin'ny teny Français, বাংলা, Español, Italiano, Ελληνικά, 日本語, English
Anisan'ireo lahatsoratra momba ny Fihetsehana tany Lybie 2011 ity lahatsoratra ity.
Ireo vahoaka any Libiae, izay mirotsaka an-tsehatra amin'ny ady ho an'ny demokrasia ary manohitra an'i Muammar Gaddafi sy ny miaramilany, no miaritra ady aman'aina efa ho herinandro maromaro izao. Vahoaka marobe no efa nandositra ny fireneny ka lasa any Tonizia na Ejipta, na any amin'ireo toby natokana hanampiana vonjimaika ireo mpitsoam-ponenana.
Tsy afaka miverina any Palestina ny ankamaroan'izy ireo. Ny antontan-taratasy momba azy – izany hoe ny zony honina any Palestina – no noesorin’ Isiraely taminy noho ny politikany amin'ny famindran-toerana mangina. Teo anelanelan'ny desambra 1995 sy marsta 1999 dia nesorin'ny Israeliana ny zo ahazoana mipetraka any Palestina ho an'ireo olona nifindra toerana any ivelan'ny faritra farany ao Jerosalema, kanefa tsy nampahafantariny an'ireo Palestiniana monina any ivelan'ny tanàna sy any ivelan'ny fireneny izany politikany izany.
Niezaka naka ny terantaniny any Lybie koa ny fanjakana palestiniana. Nanaiky ny hampidirana olona 300 mandra-pahatonga any amin'ny faritra feheziny i Israely amin'ny “maha olombelona mila fanampiana azy ireo”.
Lasa ny andiany voalohany amin'ireo mpitsoam-ponenana palestiniana ireo araka ny vaovao azo izay milaza fa mpianatra palestiniana 43 no tazonin'ny mpikarama an'adin'i Gaddafi ao Misurata rehefa tsy nanaiky nanaraka ny tafiky ny mpanaradia ny fanjakana izy ireo. Tamin'ny faran'ny volana febroary 2011 dia nitotaly 104 ireo mpianatra palestiniana niala tany Lybia.
@Abou_3ali [Yemen] Avy amin'ny namana ao Salloum: nolavin'i Ejipta ny fandalovan'ny Palestiniana ary nentina nankany amin'ny tanàna haolo ny 70 amin'izy ireo, misy zavatra tsy miova mihitsy.
@El_Deeb [Egypt]: Ny olona avy amin'ny firenena hafa rehetra afaka niditra ao Ejipta daholo afa-tsy ny Palestiniana ihany! Tena mampalahelo! 70 no isan'ny Palestiniana nentin'ny fiarabe izay nolazaina fa hanatitra azy ireo any amin'ny sisin-tany any Rafah, avy eo alefa any Gaza. Niverina nankany Libia ireto fiarabe!
@altahawi [Egypt] Satria tsy manana fahazoan-dalana hipetraka ao #Egypt izy ireo, Palestiniana 42 no nolavina tao Salloum ary naverina nankany Libia tamin'ny herinandro lasa teo!
Palestiniana 1 500 eo ho eo no nitady handalo an'i Ejipta hatramin'ny alatsinainy 7 marsta 2011, kanefa nahazo baiko mazava ny miaramila Ejipsiana fa tsy mahazo miditra ireo mpitsoa-ponenana Palestiniana [ar]. Palestiniana marobe no efa tonga teo amin'ny sisin-tany ary voatery niverina nody any an-tranony, any amin'ny tanànan'i Benghazi sy Tobrouk.
Voalaza fa izay Palestiniana tsy manana taratasy fahazoana mipetraka any Ejipta dia tsy mahazo mandalo ny sisintany mihitsy, kanefa na dia ireo mpiasa aziatika tsy manana taratasy [ar] aza dia mahazo miditra. Maneho ny heviny manoloana ny zava-misy ireo Palestiniana avy any Gaza ao amin'ny Facebook:
Ibtihal Any Misurita ny dadatoako, tsy manana kara-panondro izy, tsy afaka miditra any Gaza ny Palestiniana tsy manana taratasy, angamba manaraka ny fandaminana efa nisy hatramin'ny ela ny fanjakana Ejiptiana. Noho ny zava-misy ao anatin'ny fireneny koa, dia tsy maintsy eritreretiny izao fa mampatahotra ny Palestiniana. Tsy mivaky loha amin'izay maika izany izy.
Ibrahim Tsy manana taratasy ireo Palestiniana ireo, ny mpitsoa-ponenana hafa anefa manana ny fireneny, ny tanindrazany izay afaka mikarakara azy ka mampody azy. ny Palestiniana kosa tsy mba manana. raha mandalo an'i Ejipta izydia tsy mahita toerana aleha akory, na any Gaza izany, na any Cisjordanie, ary tsy te hivesatra azy ireo i Ejipta. Tsy ny Palestiniana any atsinanan'i Lybie loatra anefa no mampanahy fa ry zareo any andrefana. tsy fantantsika akory hoe tonga tany amin'ny sisintany any Tonizia ve izy ireo.
Tsy nisy ny antontan'isa mazava milaza ny isan'ny Palestiniana tonga tany amin'ny sisintany any Tonizia. Fiarabe mitondra fanampiana ho an'ny Palestiniana no hoe nalefan'ny masoivohony tany Tunis hanomezan-tanana azy ireo ao amin'ny sisintany manasaraka an'i Libia sy Tonizia.
@libyansrevolt: Misy Palestiniana iray mipetraka ao amin'ny toeram-piompianay any Tripoli. tsy nampandoavina na inona na inona izy.
Ny bilaogy Uprooted Palestinians no namoaka antso hanampiana ny mpitsoa-ponenana Palestiniana izay nonina sy niaina tany Liban taloha ka nandositra ny ady an-trano tao amin'ity firenena ity dia lasa nankany Libia. Mangataka fandraisana andraikitra iarahan'i Liban sy Palestine ankehitriny hanampiana azy ireo hiala any Lybie
Miharatsy hatrany ny toe-draharaha. Ny vaovao farany no nilaza fa manao famoretana amin'ireo mpiasa mpifindra monina miisa 30 000 izay niezaka nandositra nankany Tonizia ny miaramila mpanaradia an'i Kadhafi.